फिल्म “सम्झना बिर्सना” मा कस्तो छ पुजाको क्यारेक्टर? | फिल्म “सम्झना बिर्सना” मा कस्तो छ पुजाको क्यारेक्टर? – हिपमत
फिल्म “सम्झना बिर्सना” मा कस्तो छ पुजाको क्यारेक्टर?
ईटहरी ,२० मंसिर ।
फिल्म “सम्झना बिर्सना” भारतको सिलगुडीमा केहिदिन यता छायांकन भईरहेको छ । जसमा फिल्म क्षेत्रमा रुचाइएकि चन्चली नायिका पुजा शर्मा लगायतका केहि कलाकारहरु येतिखेर सिलगुडीमा छन् । फिल्ममा पुजा सम्झनाको भुमिकामा देखिदै छिन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा २ फोटो सार्बजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी गराएकी हुन् ।
फिल्मलाइ निमेश प्रधानले निर्देशन गर्दैछन भने पुजाले नायक आकाश श्रेष्ठ संग अनस्कृन रोमान्स गर्दै छन् । पछिल्लो समय पुजा र आकाशको जोडि पनि खुबै लोभलाग्दो तवरले जमिरहेको छ भने एकपछि अर्को फिल्ममा यो जोडि दोहोरीरहेको छ ।
पुजा आकाश सगै फिल्ममा शिशिर राणा मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन् । निर्माण युनिटका अनुसार सो फिल्म पुजाको अहिले सम्मकै भिन्न भूमिका रहेको बताएका छन् । सम्झना बिर्सना छायांकन सुरु भएपनि रिलिज मिति भने हालसम्म तय भैसकेको छैन । फिल्मले सिनेप्रेमी दर्शकहरुको इच्छा र चाहाना अनुसार नया टेस्ट चखाउने निर्माण पक्षको दाबि छ ।